Admissons Process >
>> English Version l Burmese version l Chinese version l Basaha Version l Tieng Viet Version
The Future is Now!! Come join the Global Health Network with US
သင့်နိုင်ငံ၏ပြင်ပသို့ထွက်၍ ထိုင်းနိုင်ငံမှာ ပညာများဆက်လက်သင်ယူလှည့်ပါ……
အင်္ဂလိပ်စာစွမ်းရည်ကောင်းမွန်ပြီး ဆက်နွယ်သည့်ဘာသာရပ်တွင် မဟာဘွဲ့ရရှိထားသော / မည်သည့်ဘာသာရပ်တွင် မဆို စိတ်ပါဝင်စားသူများ ယခုအချိန်မှစ၍ ၂၀၂၁
ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၄ ရက် မတိုင်မှီတစ်ကြိမ်, ၂၀၂၂ ခုနှစ် ဖေဖာဝါရီလ ၁ ရက် မတိုင်မှီတစ်ကြိမ်, ၂၀၂၂ ခုနှစ် မတ်လ ၃၁ ရက် မတိုင်မှီတစ်ကြိမ် လျှောက်ထားနိုင်ပါ သည်။
1st Intake of 2022 : March 31,2022 & April 30,2022 (1st Trimester 2022)
for attend Interview on :April 6-7,2022 & May 4,2022
2nd Intake of 2021: October 4, 2021 (Public Health Program) (MPH/Ph.D.Non Course only)
October 4, 2021, Public Health Sciences Program
for attending the Interview on October 12-13, 2021
3rd Intake of 2021: February 5, 2022 (Public Health Program) (MPH/Ph.D.Non Course only)
for attending the Interview on February 9, 2022 (Tentative Schedule)
Apply to CPHS Now !!!
Application form (လျှောက်လွှာ) ကို download (ဒေါင်းလုပ်) ဆွဲပြီး ပြည့်စုံစွာ ဖြည့်စွက်ပါ။
လျှောက်ထားရန် လိုအပ်သည့် စာရွက်စာတမ်း အချက်အလက်များ နှင့် အတူ email (အီးမေးလ်) / post mail (စာတိုက်) မှ တစ်ဆင့် လျှောက်ထားနိုင်သည်။ (တစ်နှစ်ပတ်လုံး လျှောက်ထားနိုင်သည်) အင်တာဗျူးကာလ မှာ မတ်လ၊ ဧပြီလ၊ အောက်တိုဘာလ တို့ ဖြစ်သည်။
2.>> (Head Quarter သို့ online စနစ်ဖြင့် လျှောက်ထားခြင်း ၊ ဖေဖော်ဝါရီလမှ မတ်လ)
(ထိုင်းဘာသာစကား စနစ် ဖြစ်သည့်အတွက် ဤစနစ်ကို နိုင်ငံခြားသားများကို အကြံမပြုပါ)
ပြည့်စုံစွာ ဖြည့်စွက်ထားသော CPHS Application form (ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးသိပ္ပံကောလိပ် လျှောက်လွှာ) နှင့် အခြား
လျှောက်ထားရန် လိုအပ်သည့် စာရွက်စာတမ်း အချက်အလက်များကို တင်ပြပါ (upload).
လျှောက်ထားသူ၏ အချက်အလက်များကို မှတ်ပုံတင်ရန် ဂျီမေးလ်လိပ်စာ (Gmail address) ကို အသုံးပြုရမည်။
ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးသိပ္ပံကောလိပ်အစီအစဉ် ၊ ချူလာလောင်ကွန်းတက္ကသိုလ်၊ ထိုင်းနိုင်ငံ
ဤအစီအစဉ်သည် ကျန်းမာရေးမူဝါဒနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှု၊ လူထုကျန်းမာရေးနှင့် မျိုးဆက်ပွါးကျန်းမာရေး၊ မြို့ပြနှင့်ကမ္ဘာ လုံးဆိုင်ရာကျန်းမာရေး၊ ပါတ်ဝန်းကျင်နှင့်လုပ်ငန်းခွင်ကျန်းမာရေး၊ ထိုင်းရိုးရာတိုင်းရင်းဆေးပညာနှင့် ခေတ်မီတိုင်းရင်း ဆေးပညာ၊ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာအမူအကျင့်များ၊ ဇီဝမော်လီကျူးအသုံးချနည်းပညာ အစရှိသည့် ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးနှင့် ဆိုင်သော ဘာသာရပ်များဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည့် ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ချူလာလောင်ကွန်းတက္ကသိုလ်ရှိ နိုင်ငံတကာအဆင့်မီပြည်သူ့ ကျန်းမာရေးဘွဲ့လွန်သင်ကြားမှုအစီအစဉ် ဖြစ်ပါသည်။ ဤအစီအစဉ်သည် ခိုင်မာသောသုတေသနရလဒ်မှတ်တမ်းများ ကြောင့် အောက်ပါကဏ္ဍ ၃ ရပ်တွင် ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့အစည်းနှင့် ကိုယ်စားပြုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရသည့်ဌာန ကိုယ် စားလှယ် (WHO CCR) အဖြစ်တာဝန်ပေးအပ်ခြင်းခံရပြီးဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းကဏ္ဍ ၃ရပ်မှာ (က) ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့အ စည်းနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သော ငှက်ဖျားပိုးကို ဇီဝနည်းဖြင့်လက္ခဏာအမျိုးအစားသတ်မှတ်သည့် သုတေသနဌာန၊ (ခ) ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့အစည်းနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သော မူးယစ်ဆေးစွဲမှုတိုက်ဖျက်ရေးသုတေသနနှင့် လေ့ကျင့်သင် ကြားရေးဌာနနှင့် (ဂ) ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့အစည်းနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သော ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ဆိုင်ရာသုတေသနနှင့် သင်ကြားလေ့ကျင့်ရေးဌာနတို့ ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းကိုယ်စားလှယ်ဌာနတစ်ခုစီတို့သည် ဒေသတွင်းရ လဒ်မှတ်တမ်း ကိုးကားနိုင်သောအရင်းအမြစ်နှင့် သင်ကြားလေ့ကျင့်ရေးဌာနအဖြစ် အကျိုးပြုဆောက်ရွက်ပေးလျှက်ရှိပါ သည်။ ကျွနု်ပ်တို့ကောလိပ်မှကျောင်းသားအများစုသည် ဒေသတွင်း၊ နိုင်ငံတွင်းနှင့် နိုင်ငံတကာတွင် ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး ကိုဦးဆောင်သူအဖြစ် ဤတက္ကသိုလ်အားကိုယ်စားပြုရန်အတွက် တွဲဖက်လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်သောခိုင်မာသည့်အဖွဲ့အ စည်းများကြဖြစ်သည့် WHO,TIGA, UNESCO, UNFPA အစရှိသည့် အဖွဲ့အစည်းများ၏ထောက်ပံ့မှုဖြင့် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း ရှိနိုင်ငံအသီးသီး၊ အထူးသဖြင့် အာရှပစိဖိတ်ဒေသများမှ လာရောက်ကြသူများဖြစ်ကြပါသည်။
ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဘာသာရပ်၊ နိုင်ငံတကာအဆင့်မီသင်ကြားမှုအစီအစဉ် (မဟာဘွဲ့သင်တန်းများ၊ အဝေးသင် မဟာဘွဲ့သင်တန်းများနှင့် ပါရဂူဘွဲ့သင်တန်းများ)
ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးသင်ကြားမှုအစီအစဉ်၌ ကျောင်းသားများအနေဖြင့် ကျန်းမာရေးမူဝါဒနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှု၊ လူထု ကျန်းမာရေးနှင့်မျိုးဆက်ပွါးကျန်းမာရေး၊ ပါတ်ဝန်းကျင်နှင့်လုပ်ငန်းခွင်ကျန်းမာရေး၊ မြို့ပြနှင့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကျန်းမာရေး၊ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာအမူအကျင့်များစသည့် အဓိကဘာသာရပ်ကြီး၅ခုအနက်မှ ၎င်းတို့၏စိတ်ပါဝင်စားမှုအပေါ်အခြေခံကာ ကျန်းမာရေးစနစ်ဖွဲ့စည်းပုံ၊ နည်းစနစ်တကျဝေဖန်ပိုင်းခြားသုံးသပ်မှု၊ ကျန်းမာရေးဘောဂဗေဒ၊ ကျန်းမာရေးဥပဒေကဲ့သို့ သော ကျယ်ပြန့်စွာချိတ်ဆက်လျက်ရှိသည့်ကဏ္ဍအသီးသီးနှင့် ထိတွေ့နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့အပြင် ကူးစက်ရောဂါပြန့် ပွားခြင်းနှင့်ကာကွယ်ခြင်းဘာသာရပ်၊ ဇီဝစာရင်းအင်းဘာသာရပ်၊ သုတေသနလုပ်ထုံးနည်းလမ်းများဘာသာရပ်စသော လက်တွေ့အသုံးကျနိုင်သည့်ပညာရပ်များကိုလည်း ထိတွေ့သင်ယူနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ သင်တန်းအနေဖြင့် ကျောင်းသား များအား ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းကဏ္ဍတွင်ဖြစ်စေ၊ အများနှင့်ဆိုင်သောလုပ်ငန်းကဏ္ဍများတွင်ဖြစ်စေ ထိထိရောက်ရောက်ပါဝင် ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်လည်း ကြိုတင်ပြင်ဆင်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။
ဤသင်တန်း၏ရည်ရွယ်ချက်မှာ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအတွက် အနာဂါတ်ခေါင်းဆောင်မျိုးဆက်သစ်များ ထွက်ပေါ်လာစေရေးကို လေ့ကျင့်သင်ကြားလံှု့ဆော်ပေးရန်ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ဌာနနှင့်ကျောင်းသားများသည် ကျန်းမာ ရေးနှင့်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်းများကို တိုးတက်စေခြင်းဖြင့် ပိုမိုကောင်းမွန်သောကမ္ဘာကြီးဖြစ်လာရန် ပြင်းပြစွာ စိတ်အားထက်သန်လျက်ရှိကြပါသည်။ ကျွနု်ပ်တို့သည် ပိုမိုလုံခြုံ၍ပိုမိုထိရောက်မှုရှိသော ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေး ခြင်းမှ ကျန်းမာရေးအာမခံ၏အကျုံးဝင်မှုကို ပိုမိုကျယ်ပြန့်စေခြင်း၊ တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦးအကြားကွာဟနေမှုများကိုဖယ်ရှားခြင်း၊ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုစနစ်ကြီးတစ်ခုလုံး၏ လုပ်ဆောင်မှုများကိုပုံစံချ၍ ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ဆောင်ရွက်ခြင်းအထိ လွန်စွာစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းပြီး အရေးကြီးသည့်ပြဿနာများကို ပိုမိုကောင်းမွန်စွာဖြေရှင်းနိုင်ရန် ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိပါ သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ပညာသင်ကြားမှုအစီအစဉ်အနေဖြင့် ကျောင်းသားများအား များပြားကျယ်ပြောသည့်ပြည်သူ့ကျန်း မာရေးစိန်ခေါ်မှုများကိုဖြေရှင်းတတ်စေမည့် နည်းစနစ်တကျတွေးခေါ်နိုင်မှု၊ ပြဿနာကိုစနစ်တကျကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းတတ် မှုစသည့်အရည်အချင်းများ မြင့်မားစေရေးကိုကူညီပေးရန် အထူးရည်ရွယ်ပါသည်။ ကျန်းမာရေးမူဝါဒနှင့် စီမံခံ့ခွဲမှုသင်တန်း သို့တက်ရောက်သောကျောင်းသားများသည် ထိုင်းနိုင်ငံနှင့်ကမ္ဘာအနှံ့မှ လာရောက်ကြသူများဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းတို့သည်စာ ပေပညာရပ်များကို ကောင်းစွာတတ်မြောက်ကျွမ်းကျင်ထားကြပြီး စိတ်အားထက်သန်မှုပြင်းပြသူများလည်းဖြစ်ကြပါသည်။ ထို့အပြင် ကျွနု်ပ်တို့၏ ကျောင်းသားများအားလုံးသည်ကောင်းမွန်သည့် လုပ်ငန်းခွင်အတွေ့အကြုံရှိထားပြီးသူများဖြစ်ကြပြီး၊ သင်ယူလေ့လာရာ၌ ထိုးထွင်းကြံဆသောတွေးခေါ်မျှော်မြင်မှုများဖြင့် စာသင်ခန်းအတွင်းအသိပညာများကို ဖလှယ်၍တိုး ပွားစေသူများလည်းဖြစ်ကြသည်။
စာသင်ခန်းတွင်းသင်ကြားမှုကိုကျော်လွန်သွားသော နောက်ဆက်တွဲအတွေ့အကြုံများသည် ပြည်သူ့ကျန်းမာ ရေးပညာအတွက် မရှိမဖြစ်အရေးပါကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ပါသည်။ သို့ဖြစ်၍ ကျွနု်ပ်တို့ကောလိပ်နှင့် ထိပ်တန်းပြည်သူ့ကျန်းမာရေးမူဝါဒချမှတ်သူများ၊ သမားတော်ကြီးများအကြားတွင်ရှိနေသော ခိုင်မာသောဆက်သွယ်မှုများသည် ကျောင်း သားများအား ၎င်းတို့၏စာသင်ခန်းအတွင်းမှသင်ယူလေ့လာမှုများကို လက်တွေ့ဘဝပြည်သူ့ကျန်းမာရေးစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် ထိုင်းနိုင်ငံနှင့် ထိုင်းနိုင်ငံပြင်ပမှ မူဝါဒဆိုင်ရာပြဿနာများတွင်အသုံးချရန် အခွင့်အလမ်းများပေးလျှက်ရှိပါသည်။
ဤမြို့ပြနှင့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာသင်တန်းသည် မဟာဘွဲ့ကျောင်းသားများနှင့် ပါရဂူဘွဲ့ကျောင်းသားများအား စီးပွား ရေးအမြင်၊ နိုင်ငံရေးအမြင်၊ လူမှုရေးအမြင်၊ ယဉ်ကျေးမှုအမြင်နှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအမြင်များ အမျိုးမျိုးပါ ဝင်သည့် မြို့ပြနှင့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကျန်းမာရေးအကြောင်းအရာများတွင် သာမန်ထက်ကျော်လွန်တတ်မြောက်သူများ ဖြစ် လာစေရန် ကြိုးပမ်းအားထုတ်လျှက်ရှိပါသည်။ ဤသင်တန်းမှအဓိကသင်ကြားသောအတန်းများကို အထူးပြုသင်ယူခြင်း သည် ကျောင်းသားများအား မိမိကျရာအခန်းကဏ္ဍတွင် ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးကိစ္စများကို ညှိနှိုင်းပူပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် နိုင်နင်းစွာကိုင်တွယ်ဆောင်ရွက်သည့်အခါ ရာသက်ပန်ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးပြီး လေ့လာသင်ယူတတ်သူများဖြစ်လာစေပါ လိမ့်မည်။
ဤသင်တန်းအနေဖြင့် ကျောင်းသားများအား ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးအပေါ်သက်ရောက်ထိခိုက်တတ်သော ဇီဝဆိုင်ရာ၊ ရုပ်ဝတ္ထုဆိုင်ရာ၊ ဓါတုဆိုင်ရာ ပါတ်ဝန်းကျင်အနေအထားအကြောင်းအချက်များကို လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးလျက်ရှိပါ သည်။ သို့ဖြစ်၍ ကျောင်းသားများသည် ပါတ်ဝန်းကျင်၊ လုပ်ငန်းခွင်ကျန်းမာရေးနှင့်ပက်သက်ပြီး အထူးကျွမ်းကျင်တတ် မြောက်ကြမည်ဖြစ်ပါသည်။
ပါတ်ဝန်းကျင်နှင့်လုပ်ငန်းခွင်ကျန်းမာရေးဘာသာရပ်အနေဖြင့် လူသားများအားထိခိုက်နိုင် သော ဘေးအန္တရာယ် ဆိုးကျိုးများကို နည်းနိုင်သမျှလျော့နည်းစေကာ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးကိုတိုးတက်စေသည့် ပါတ်ဝန်းကျင်ကျန်းမာရေးဆိုင် ရာစိန်ခေါ်မှုများနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှုများအကြောင်းကို အဓိကထားသင်ကြားပေးပါသည်။ ယင်းကဲ့သို့ပါတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမှု များနှင့်ထိတွေ့ရာမှပေါ်ပေါက်လာသည့် သက်ရောက်မှုပြဿနာများသည် ထိုင်းနိုင်ငံနှင့်အခြားသောနိုင်ငံအချို့တွင်ပြည် သူ့ကျန်းမာရေးမူဝါဒပြဿနာအဖြစ် ထိပ်ဆုံးမှ ရပ်တည်လျက်ရှိပါသည်။ ပြည်သူ့ကဏ္ဍ၊ တစ်ဦးချင်းကဏ္ဍ၊ပညာရှင်ကဏ္ဍစသည့်ကဏ္ဍအသီးသီးက ကျွန်ုပ်တို့၏ပါတ်ဝန်းကျင်နှင့်ပက်သက်သော အကြောင်းအရာများကိုနားလည်၍ ၎င်းပတ်ဝန်း ကျင်ကို ကာကွယ်ရန်စွမ်းရည်ကိုပိုမိုတိုးတက်စေရန်အတွက် အထူးဝိုင်းဝန်းကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ ဤသင် တန်းတွင် ပါတ်ဝန်းကျင်နှင့်လုပ်ငန်းခွင်ကျန်းမာရေး၊ ပါတ်ဝန်းကျင်မှတဆင့်ကူးစက်တတ်သောရောဂါများ၊ ထိတွေ့မှုပမာဏကို လေ့လာသုံးသပ်ခြင်းနှင့် လူသားများအပေါ်သက်ရောက်မှုပမာဏကို လေ့လာသုံးသပ်ခြင်းအစရှိသည့် ဘာသာရပ်များ စုစည်းပါဝင်နေသည်။ သို့ဖြစ်၍ သင်တန်း၏အဓိကရည်မှန်းချက်မှာ ပါတ်ဝန်းကျင်နှင့်လုပ်ငန်းခွင်ကျန်းမာရေးပညာရပ်ကို အထူးကျွမ်းကျင်တတ်မြောက်ပြီး အရည်အသွေးပြည့်ဝသည့်ပညာရှင်များဖြစ်လာစေရေးကို လေ့ကျင့်သင်ကြားပေး ရန်ဖြစ်ပါသည်။ ယင်းသို့သင်ကြားခြင်းတွင် ဆိုးကျိုးများကိုရှာဖွေဖော်ထုတ်ခြင်း၊ အန္ထရာယ်သက်ရောက်ခံရနိုင်ခြေရှိသူများ ကိုအတည်ပြုခြင်းနှင့် ထိတွေ့နိုင်ခြေအား ကြိုတင်ကာကွယ်ခြင်းစသည်တို့ပါဝင်ပါသည်။ အဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေနိုင်သော ပစ္စည်းအမျိုးအစားများစွာကို လူထုအကြားတွင်သာမက လုပ်ငန်းခွင်နေရာ၌လည်း ကြုံတွေ့ရတတ်ပါသည်။ သို့သော် ထိ တွေ့နိုင်မှုပမာဏနှင့် အခြေအနေအကြောင်းတရားတို့မှာ သိသိသာသာကွဲပြားခြားနားလျက်ရှိနေသောကြောင့် ယင်းထိ တွေ့မှုများ ကိုထိန်းချုပ်ရန်နှင့် ရောဂါများကိုကာကွယ်ရန်အသုံးပြုသည့် မဟာဗျူဟာနည်းလမ်းများမှာလည်း မတူညီကြပါ။ ကျွနု်ပ်တို့ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးသိပ္ပံကောလိပ်၌ပြုလုပ်လျက်ရှိသော မဟာသိပ္ပံနှင့်ပါရဂူသင်တန်းသုတေသနများသည် ဒေသတွင်းမှ နိုင်ငံတကာတိုင် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အကျိုးပြုနိုင်ပြီး စည်းစနစ်များလည်းပြည့်စုံစွာရှိပါသည်။ ကျွနု်တို့၏သင် ကြားရေးအဖွဲ့ဝင်များသည် ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးအငြင်းပွါးမှှုများအပေါ် နိုင်ငံတွင်းအမြင်၊ နိုင်ငံတကာအမြင်များဖြင့် တက်ကြွစွာနှင့် စိတ်အားထက်သန်စွာ အကြံပေးနိုင်သူများလည်းဖြစ်ကြပါသည်။
ဤသင်တန်း၌ သင်တန်းခေါင်းစဉ်တွင်ပါရှိသောအရေးကြီးသည့်ဘာသာရပ်နှစ်ခုကို အဓိကထား၍သင်ကြားပေးပါ သည်။ ဤသင်တန်းသည် ပြည်သူလူထု၏ကျန်းမာရေးလိုအပ်ချက်များနှင့် မျိုးဆက်ပွါးကျန်းမာရေးပြဿနာများအရ လူထု အခြေအနေလေ့လာသုံးသပ်ခြင်း၊ ပြဿနာများ ရှာဖွေဖော်ထုတ်အတည်ပြုခြင်းများနှင့် ပတ်သက်၍ နက်ရှိုင်းစွာနားလည်သ ဘောပေါက်စေခြင်း၊ လက်တွေ့ကွင်းဆင်းလေ့ကျင့်စေခြင်းများဖြင့် ကျောင်းသားများကို လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးပါသည်။
လူထုကျန်းမာရေး၊ မျိုးဆက်ပွါးကျန်းမာရေးနှင့် လူဦးရေပြဿနာများအပေါ်နားလည်မှုကိုလည်းကောင်း၊ လူထုကျန်းမာရေးနှင့် မျိုးဆက်ပွါးကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ကြားဝင်ဆောင်ရွက်မှုများကို နားလည်ရန်လိုအပ်သော အသိပညာဗဟုသုတများကိုလည်းကောင်း ပေးအပ်ရန် ဤသင်တန်းကိုစီစဉ်ဆောင်ရွက်ထားပါသည်။ ဤသင်တန်းသည် လူထုကျန်းမာရေးနှင့် မျိုးဆက်ပွါးကျန်းမာရေးအပေါ်လွှမ်းမိုးနေသော လူမှုရေး၊ ယဉ်ကျေးမှုနှင့် စီးပွါးရေးဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများနှင် ဆက် စပ်နေသည့် လူထုအဆင့်၊ နိုင်ငံအဆင့်၊ ကမ္ဘာ့အဆင့်စိန်ခေါ်မှုများကိုလည်း စူးစမ်းလေ့လာ၍စစ်ဆေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
ဤသင်တန်းတွင် လူထုအခြေအနေလေ့လာသုံးသပ်ခြင်းနှင့် မျိုးဆက်ပွါးကျန်းမာရေးဘာသာရပ်နှစ်ခုကို ပေါင်းစပ် ထားပါသည်။
၁။ လူထုအခြေအနေလေ့လာသုံးသပ်ခြင်းဘာသာရပ်တွင် လူထုဆိုင်ရာအခြေခံသဘောတရားများ၊လူထုဖွဲ့စည်း တည်ဆောက်ပုံ၊ လူထုဆီသို့ချဉ်းကပ်ပုံနည်းလမ်းများ၊ လူထုအကြောင်းပုံစံကားချပ်ရေးဆွဲခြင်း၊ လူမှုှုဆက်ဆံရေးကွန်ယက် အကြောင်းပုံစံကားချပ်ရေးဆွဲခြင်း၊ လူထု၏လူမှုရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှု လက္ခဏာသဘောထားများ၊ လူထုကိုယ်တိုင်ပါဝင် ဆန်းစစ်သုံးသပ်နိုင်မှုကိုလေ့လာခြင်း၊ လူထုတွင်းပြဿနာများကို ဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း အစရှိသည်တို့ပါဝင် ပါသည်။
၂။ မျိုးဆက်ပွါးကျန်းမာရေးအပိုင်းကိုမူ မျိုးဆက်ပွားကျန်းမာရေးအကြောင်းမိတ်ဆက်ခြင်းနှင့် ၎င်းကိုသိနားလည် ရရှိခံစားခွင့်မြင့်မားစေရေး၊ သားဆက်ခြားကျန်းမာရေး၊ မိခင်နှင့်ကလေးကျန်းမာရေး၊ အပျိုဖော်ဝင်စအရွယ်ကျန်းမာရေး၊ မလိုလားအပ်သောကိုယ်ဝန်ရခြင်းနှင့် ဖျက်ချခြင်း၊ လူငယ်များအကြား ခုခံအားကျဆင်းမှုရောဂါကို ကြိုတင်ကာကွယ်ခြင်း၊ မျိုးဆက်ပွါးအင်္ဂါများတွင် ဖြစ်ပွါးတတ်သောကင်ဆာများ၊ အိုမင်းရင့်ရော်မှုကိုစောင့်ရှောက်ခြင်း အစရှိသည့် အခန်းကဏ္ဍများ ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။
သင်တန်းပြီးဆုံးသည့်အခါ ကျောင်းသားအနေဖြင့် မိမိလေ့လာသောလူထုအဖွဲ့အစည်း၏ အခြေအနေအပေါ် လေ့လာသုံးသပ်ခြင်းကို ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်၊ မိမိလေ့လာသော လူထုအဖွဲ့အစည်း၏ မျိုးဆက်ပွါးကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ အခြေအနေများ၊ ပြဿနာများကိုနားလည်၍ လေ့လာမှုသုတေသနများပြုလုပ်နိုင်ရန်နှင့် မျိုးဆက်ပွါးကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုများ ရရှိခံစားခွင့်ကို မြှင့်တင်ပေးရေးအတွက် ဖြေရှင်းချက်များကိုရရှိနိုင်ရန် မျှော်လင့်ပါသည်။
ဤသင်တန်း၏ရည်ရွယ်ချက်မှာ ပြည်တွင်းနှင့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးပြဿနာများကိုပေါ်ပေါက်စေ လျှက်ရှိသော ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာအမူအကျင့်များကိုလေ့လာသည့် သုတေသနများကိုဆောင်ရွက်ရန်နှင့် ပြဿနာများကို အမြင်သစ်ဖြင့်ကြည့်ရန်အတွက် ကြားဝင်အစီအစဉ်များကို ဖော်ထုတ်ခြင်း၊ အကဲဖြတ်သုံးသပ်ခြင်း၊ ဖြန့်ဝေပေးခြင်းများကို လေ့လာသည့် သုတေသနများကိုဆောင်ရွက်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့အပြင်ကျောင်းသားများအနေဖြင့် ၎င်းတို့၏သုတေသနကို ပြုလုပ်သည့်အခါ အသုံးဝင်လာမည့်အတွေ့အကြုံနှင့် ကျွမ်းကျင်မှုများပြည့်ဝလာစေရန်လည်း ရည်ရွယ်ပါသည်။ ကျောင်း သားများသည် (အစာအာဟာရ၊ ကိုယ်လက်လှုပ် ရှားခြင်း၊ အဝလွန်ခြင်း၊ အရက်သောက်ခြင်း၊ ဆေးလိပ်သောက်ခြင်း၊ မူး ယစ်ဆေးသုံးစွဲခြင်းအစရှိသည့်) ကျန်းမာရေးအမူအကျင့်များဆိုင်ရာ အခြေခံဗဟုသုတများအပေါ်တွင်လည်းကောင်း၊ အ ထူးတလည်ပြုလုပ်မည့် ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးနှင့် ကြားဝင်အစီအစဉ်ကဏ္ဍများတွင်လည်းကောင်း ၎င်းတို့၏ကျွမ်းကျင် တတ်မြောက်မှုကို ပြသနိုင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုမျှမကသေးဘဲ ၎င်းတို့စိတ်ပါဝင်စားသည့်အခန်းကဏ္ဍများတွင် ကျွမ်းကျင် စွာအထူးဆောင်ရွက်နိုင်သည့် စွမ်းရည်များကိုလည်း မြှင့်တင်ပေးထားပါသည်။
ဤသင်တန်းသည် ပညာရေးကဏ္ဍ၊ အကျိုးအမြတ်မကြည့်သောအဖွဲ့အစည်းများ၊ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ခေါင်းဆောင်မှုကဏ္ဍများတွင် သုတေသနများဆက်လက်လုပ်ဆောင်သွားမည့် သုတေသီများပေါ်ထွက်လာရေးအတွက် လည်းရည်ရွယ်ပါသည်။ ကျောင်းသားများအနေဖြင့် ကျန်းမာရေးအမူအကျင့်များ၊ အစာအဟာရ၊ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားခြင်း၊ အဝလွန်ခြင်း၊ အရက်သောက်ခြင်း၊ ဆေးလိပ်သောက်ခြင်း၊ မူးယစ်ဆေးသုံးစွဲခြင်းများအပေါ်တွင် လွှမ်းမိုးနေသောအ ကြောင်းတရားများကိုပေါ်ပေါက်စေသည့် ကျန်းမာရေးအမူအကျင့်များ၏ အရေးပါမှုများကို သင်ယူလေ့လာရမည် ဖြစ်ပါသည်။ ယင်းသို့ သင်ယူလေ့လာမှုများတွင် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာအမူအကျင့်များနှင့် အန္ကရာယ်ရှိသောသဘောတရားများ၊ သီအိုရီများလည်း ပါဝင်ပါသည်။
ကျောင်းသားများသည် ၎င်းတို့လက်တွဲလုပ်ကိုင်ခဲ့သော (သို့မဟုတ်) အနာဂါတ်တွင်ဆက်၍လက်တွဲလုပ်ကိုင် သွားမည်ဖြစ်သော ပြည်သူလူထုအကြား ကျန်းမာရေးအမူအကျင့်နှင့်သက်ဆိုင်သည့်သုတေသနများကို ဖော်ထုတ်ဆောင် ရွက်ကြရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းတို့အနေဖြင့် ခန္ခာကိုယ်အရည်များအတွင်း အရက်နှင့်မူးယစ်ဆေးတို့ကို စမ်းသပ်စစ်ဆေး နိုင်သော ဓါတ်ခွဲခန်းနည်းလမ်းများအပါအဝင် အရက်စွဲနေသူများ၊ မူးယစ်ဆေးစွဲနေသူများ၊ ခုခံအားကျဆင်းမှုရောဂါကူး စက်ခံစားနေရသူများအပေါ်တွင်ပြုလုပ်သည့် သုတေသနများနှင့် ကြားဝင်အစီအစဉ်များကိုလည်း ဆောင်ရွက်ကောင်း ဆောင်ရွက်ကြရမည်ဖြစ်သည်။
ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးသိပ္ပံ၊ နိုင်ငံတကာအဆင့်မီသင်ကြားမှုအစီအစဉ် (မဟာသိပ္ပံဘွဲ့နှင့် ပါရဂူဘွဲ့သင် တန်းများ)
ကိုယ်ပိုင်ရပ်တည်၍ တစ်နှစ်လျှင်စာသင်ကာလနှစ်ပိုင်းကိုအခြေခံသော ဤသင်တန်းများ၏ရည်ရွယ်ချက်မှာ ထိုင်း ရိုးရာတိုင်းရင်းဆေးပညာ၊ ရနံ့ကုထုံးပညာ၊ ဆေးဘက်ဝင်အပင်ပညာ (ဗိန္ဓောပညာ)၊ ဒေသခံအပင်များဆိုင်ရာရိုးရာပညာ များ၏ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးကင်းခြင်း၊ အာနိသင်ထက်မြက်ခြင်း၊ အရည်အသွေးပြည့်ဝခြင်းများကို သိပ္ပံနည်းကျစွာအခြေ ခံ၍ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးသိပ္ပံဆိုင်ရာဗဟုသုတများ ရရှိပေါ်ထွက်လာစေရန်ဖြစ်ပါသည်။ ဤသင်တန်းတွင် ဇီဝနည်း၊ မျိုးရိုးဗီဇ ဒီအန်န်အေနည်း၊ ဓာတုနည်းများဖြင့် ဆေးကုန်ကြမ်းများကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း၊ ဓါတုပစ္စည်းများကိုအထူးအခြေခံကာ ဆေး ကုန်ကြမ်းများကိုတိကျသော ဆေးဝါးဗေဒအညွှန်းများသတ်မှတ်ခြင်း၊ဆေးဘက်ဝင်အပင်များ၏ ဇီဝအကျိုးကျေးဇူးများကို လူနှင့်တိရစ္ဆာန်များ၌ စမ်းသပ်ခြင်း စသည့် စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကဏ္ဍများစွာပါဝင်ပါသည်။
ရိုးရာဓလေ့များဖြင့် ဒေသထွက်တိုင်းရင်းဆေးပင်များအသုံးချ ဆေးပညာသင်တန်း
ဆေးဘက်ဝင်အပင်များ၏ ဇီဝဖြစ်စဉ်အကျိုးဖြစ်ထွန်းမှုနှင့် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးကင်းစင်မှုတို့ကြောင့် ၎င်းတို့ဖြင့် ဖော်စပ်သောဆေးများသည် ပိုမိုတွင်ကျယ်၍ လူကြိုက်များလာလျက်ရှိပါသည်။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးကင်းခြင်း၊ အာနိသင် ထက်မြက်ခြင်းနှင့် အရည်အသွေးပြည့်ဝခြင်းများပြည့်စုံကြောင်း သေချာစေရန်အတွက် ဆေးဘက်ဝင်အပင်ထုတ်ဆေးများ၏ ထူးခြားသောသွင်ပြင်လက္ခဏာများကို သတ်မှတ်ပေးရန် လိုအပ်ပေသည်။ မော်လီကျူးအဆင့်သုံး နည်းစနစ်များကိုလည်း ဆေးဘက်ဝင်အပင်များ အတွက် လေ့လာသည့် သုတေသနများတွင် အသုံးဝင်သောနည်းစနစ်များအဖြစ် ဖော်ထုတ်သတ် မှတ်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့် ဒီအန်န်အေဖြင့် မျိုးရိုးဗီဇလက္ခဏာကိုဆန်းစစ်လေ့လာခြင်း၊ ဇီဝသက်ရှိများ၏ ဆင့်ကဲ ပြောင်းလဲလာမှုဖြစ်စဉ်များကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာကြည့်ခြင်း၊ တူညီသောအခြေခံဖွဲ့စည်းတည်ရှိပုံများကိုအခြေခံ၍ သက်ရှိမျိုး စိတ်များ၊ မျိုးစုများသတ်မှတ်ခြင်း၊ အရည်အသွေးမပြည့်မီသောပါဝင်ပစ္စည်းများကို စစ်ဆေးထုတ်ဖော်ခြင်း စသည်တို့ဖြစ်ပါ သည်။ ပီစီအာရ်- အာအက်ဖ်ပီဒီ (PCR-RFPD)၊ အာရ်အေပီဒီ (RAPD)၊ အေအက်ဖ်အယ်လ်ပီ (AFLP)၊ အိုင်အက်စ် အက်စ်အာရ် (ISSR)၊ သေးမွှားသောဒီအင်န်အေများ၊ အက်စ်အင်န်ပီ (SNPs) နှင့် ဒီအင်န်အေလျှို့ဝှက်နံပါတ်များကဲ့သို့ ဒီအင်န်အေအခြေခံသည့်မော်လီကျူးများသည် ဆေးဘက်ဝင်အပင်များကိုလေ့လာသောသုတေသနများတွင် များစွာအသုံး တည့်လျှက်ရှိပြီး အရေးကြီးသော ဆေးဘက်ဝင်အပင်မျိုးစိတ်များ၏ သွင်ပြင်လက္ခဏာများကို သတ်မှတ်ရာတွင်လည်းကျယ် ပြန့်စွာ အသုံးပြုလျက်ရှိပါသည်။
ဤသင်တန်း၏ရည်ရွယ်ချက်မှာ ဆေးဘက်ဝင်အပင်တိုင်းရင်းဆေးဝါးများကဏ္ဍတွင်သိပ္ပံနည်းကျ လက်တွေ့ သုတေသနများဖြင့် အသိပညာများကိုညွှန်ပြနိုင်စွမ်းရှိသော ဘွဲ့လွန်ကျောင်းသားများ မွေးထုတ်ပေးရန်ဖြစ်သည်။
ဤသင်တန်းသည် ဆေးလက်တွေ့သုတေသနများ၊ လူနှင့်တိရစ္ဆာန်များ၌စမ်းသပ်နိုင်သော ဆေးဘက်ဝင်အပင် များအသုံးချဆေးပညာနှင့် တိုင်းရင်းဆေးပညာစသည်တို့၏ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးကင်းစင်မှု၊ ဆေးအာနိသင်နှင့် အရည်အသွေးတို့ကို လေ့လာသည့် သုတေသနများအား အထူးအလေးထား သင်ကြားပါသည်။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးကင်းစင်မှုနှင့် ဆေးအာနိသင်ကို လေ့လာသော သုတေသနများတွင် ဆဲလ်များကိုစစ်ဆေးခြင်း၊ အင်ဇိုင်းဖြစ်စဉ်များ၊ ဓါတုဖြစ်စဉ်များ၊ တိရစ္ဆာန် နမူနာများကိုသုံးခြင်းစသည့် ဇီဝဖြစ်စဉ်မြောက်မြားစွာအကျုံးဝင်နေပါသည်။ အရည်အသွေးကိုလေ့လာသော သုတေသန များကိုလည်း ရှုထောင့်အမျိုးမျိုးဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ ဆေးကုန်ကြမ်းများကို တိကျသောဆေးဝါးဗေဒအညွှန်းများသတ် မှတ်ခြင်းသည်လည်း ဆေးဘက်ဝင်အပင်ထုတ်ဆေးဝါးများစံသတ်မှတ်ရာ၌ မရှိမဖြစ်အရေးပါလှပေသည်။ အပင်များ၏ရုပ် သွင်လက္ခဏာ၊ ခန္ဓာဗေဒလက္ခဏာနှင့် တစ်ရှူးနှင့်ဆဲလ်လက္ခဏာများသည် အဏုကြည့်မှန်ဘီလူးများဖြင့် ထင်ရှားစွာ အတည်ပြုနိုင်သောအရာများ ဖြစ်ပါသည်။ မော်လီကျူးအသုံးချနည်းလမ်းများကို ဒီအင်န်အေလက္ခဏာစစ်ဆေးခြင်းအတွက် အသုံးဝင်သော လက်နက်များအဖြစ်လည်း ဖော်ထုတ်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။ ဆေးကုန်ကြမ်းတစ်ခုစီတွင်ပါဝင်သော တိကျသည့် အပင်ဇီဝဒြပ်ပေါင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ဆေးဘက်ဝင်အပင်ထုတ်ဆေးများသည် ဆေးဝါးအာနိသင်ပိုင်းနှင့်ပက်သက်ပြီး အထူး ကောင်းမွန်လှပေသည်။ ဆေးဘက်ဝင်အပင်ထုတ်ဆေးများ၏အရည်အသွေးကို အားဖြည့်ပေးရန်အတွက် ဓာတုပစ္စည်း လက္ခဏာနှင့် အပင်ဇီဝပစ္စည်းပမာဏဖော်ပြမှုများကို လိုအပ်ပါသည်။ ဤသိပ္ပံနည်းကျသက်သေပြနိုင်သော အကြိုဆေး လက်တွေ့သုတေသနများသည် ဆေးလက်တွေ့သုတေသနများ မပြုလုပ်မီ ရှေ့ပြေးအဖြစ်အရေးပါပြီးဆေးဘက်ဝင် အပင်ထုတ်ကုန်များ ကျယ်ပြန့်စွာဖွံ့ဖြိုးလာစေရန်အတွက်လည်း အရေးပါပေသည်။
ဤသင်တန်းမှ အောက်ပါသိပ္ပံနည်းကျသုတေသနအမျိုးမျိုးကို စီစဉ်ပေးလျက်ရှိပါသည်။
ဓာတ်ပြုလွယ်သောဓာတုပစ္စည်းပမာဏဖော်ပြမှုကို အထူးတလည်ရည်ညွှန်းကိုးကား၍ ဆေးဘက်ဝင်အပင်များကို စံသတ်မှတ်ခြင်း
ဆေးဘက်ဝင်အပင်များ၏ အာနိသင်နှင့်အဆိပ်ကို အကဲဖြတ်သုံးသပ်ခြင်း
(လူနှင့်တိရစ္ဆာန်များတွင်ပြုလုပ်နိုင်သော အဏုဇီဝပိုးမွှားများကိုတိုက်ထုတ်သည့်နည်းလမ်း၊ ဓါတ်တိုးဓါတ်ပြုခြင်း နည်းလမ်း၊ အင်ဇိုင်းများကိုဆန့်ကျင်ဓါတ်ပြုခြင်းနည်းလမ်း၊ ဗီဇထွန်းခြင်းနည်းလမ်း၊ ဆဲလ်ဆိပ်သင့်ဓါတ်ပြုခြင်း များအစရှိသဖြင့်)
ဤသင်တန်း၏ရည်ရွယ်ချက်မှာဇီဝဗေဒ၊ ဇီဝဓါတုဗေဒ၊ ငှက်ဖျားပိုးမျိုးရိုးဗီဇ (အထူးသဖြင့် အဖြစ်အများဆုံးငှက် ဖျားပိုးဖြစ်သည့် Plasmodium Falciparum ၏ဗီဇမျိုးရင်းများနှင့် ဖွဲ့စည်းတည်ရှိနေပုံ) စသည့် ကဏ္ဍများနှင့်ဆိုင်သော အ ခြေခံသုတေသနသနများကိုပြုလုပ်နိုင်ရန်နှင့် အချက်အလက်များကိုစုဆောင်းနိုင်ရန်ဖြစ်ပါသည်။
ငှက်ဖျားရောဂါသည် ကမ္ဘာ့အဆင်းရဲဆုံးနိုင်ငံများရှိ ကပ်ဘေးဖြစ်ပွါးလေ့ရှိရာနေရာများတွင် အရေးအကြီးဆုံးပြည်သူ့ ကျန်းမာရေးပြဿနာတစ်ခုအဖြစ် ဆယ်စုနှစ်များစွာကြာသည့်တိုင် တည်ရှိခဲ့ပါသည်။ လွန်ခဲ့သောနှစ်၂၀အတွင်း ငှက်ဖျား ရောဂါဖြစ်ပွါးနှုန်းသည် တိုးမြင့်လာခဲ့ပြီး ပြင်းထန်စွာရောဂါဖြစ်ပွါးသူသန်းပေါင်း ၃၀၀ ကျော်ရှိကာ နှစ်စဉ်အနည်းဆုံးတစ် သန်းမျှ သေဆုံးလျက်ရှိပါသည်။ သေဆုံးသူများ၏ ၉၀ရာခိုင်နှုန်းသည် အာဖရိကတောင်ပိုင်း ဆာဟာရဒေသတွင်ဖြစ်ပွါး သော (အထူးသဖြင့် ငါးနှစ်အောက်ကလေးငယ်များတွင်ဖြစ်ပွားသော) ငှက်ဖျားရောဂါကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ ငှက်ဖျားရောဂါ ကို ဆဲလ်တစ်ခုတည်းရှိသော Plasmodium မျိုးစိတ်ပိုးမွှားက ဖြစ်ပွားစေပါသည်။ မျိုးစိတ်ပေါင်း တစ်ရာကျော်အနက် Plasmodium falciparum ၊ P.vivax ၊ P.ovale နှင့် P. malariae စသည့်မျိုးစိတ်များသည် အနောဖလိ (Anopheles) ခြင်အမမှတဆင့် လူကိုကူးစက်စေနိုင်ပါသည်။ Plasmodium falciparum မှာ အဆိုးရွားဆုံးအန္ကရာယ်ရှိပြီး အသက်ဆုံးရှုံး သည်အထိ ဖြစ်ပွားစေနိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ရရှိသုံးစွဲနိုင်သောငှက်ဖျားဆေးများ၏ ဆေးယဉ်ပါးမှုကို ပုံမှန်စစ်ဆေးစောင့် ကြည့်ခြင်းမှာ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးရောဂါစုံစမ်းထောက်လှမ်းခြင်းကဏ္ဍအတွက် အထူးအရေးပါလှပါသည်။ ထိုပြဿနာကိုဖြေရှင်းရန် ငှက်ဖျားရောဂါသုံး ဇီဝမော်လီကျူးနည်းစနစ်များသင်တန်း အနေဖြင့် နှစ်ပေါင်း ၂၀ ကျော်သုတေသနများပြု လုပ်ခဲ့ပါသည်။ ကျောင်းသားများသည် ဓါတ်ခွဲခန်းအသုံးပြုပုံအတတ်ပညာများကို အတွေ့အကြုံရှိသောသုတေသီများ ထံမှ သင်ယူနိုင်ကြမည်ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် ကပ်ပါးပိုးမွှားအကောင်ဖေါက်ခြင်းနှင့် ဇီဝမော်လီကျူးပညာနှစ်ရပ်စလုံး တွင် နည်းပညာကျွမ်းကျင်မှုနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းပေါင်းများစွာကို ဖော်ထုတ်ခဲ့ပြီးပြီဖြစ်ပါသည်။
မော်လီကျူးနည်းစနစ်များကိုသုံး၍ မျိုးရိုးဗီဇပြောင်းလဲခြင်းကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာလေ့လာခြင်း
ပရိုတင်း (protein) ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာလေ့လာခြင်း
ဆန်းသစ်တီထွင်သောကျန်းမာရေးသိပ္ပံနှင့်ကျန်းမာခြင်း ဆိုင်ရာ သင်တန်း
ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးသိပ္ပံတွင် သင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွင် မဟာသိပ္ပံ (M.Sc.) နှင့် ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးသိပ္ပံ (Ph.D.) ဘွဲ့လွန်ပရိုဂရမ်နှစ်ခုပါရှိသည်။
၂၀၂၂ ခုနှစ်ပညာသင်နှစ်တွင်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးသိပ္ပံကောလိပ်သည်အောက်ပါအစီအစဉ်များတွင် ဘာသာရပ်ခွဲလေးခုကိုစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။
(1) ဆေးရွက်ကြီးနှင့်ဆေးဖက်ဝင်အပင်များဆိုင်ရာသိပ္ပံ ဘာသာရပ်
(3) ဆန်းသစ်တီထွင်သောကျန်းမာရေးသိပ္ပံနှင့်ကျန်းမာခြင်း ဆိုင်ရာ ဘာသာရပ်
(4) လုပ်ငန်းခွင်သန့်ရှင်းရေးနှင့်ဘေးကင်းရေးဆိုင်ရာ ဘာသာရပါ
၁)။ ဆေးရွက်ကြီးနှင့်ဆေးဖက်ဝင်အပင်များသိပ္ပံ၊ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးသိပ္ပံသုတေသန၌
အခြေခံဆေးရွက်ကြီးပညာရပ်များကိုလိုအပ်သောတရား၀ င်သဘောတူညီချက်များဖြင့်ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာစီးပွားရေးကို အလေးပေးသင်ကြားသည်။
ထို့အပြင်၊ ဤဘာသာရပ်သည် ဆေးဖက်ဝင်အပင်အရွက်များ၏ ပါဝင်မှုများကို ဓာတုဗေဒနည်းကျစွာ ဆေးဝါးဖော်စပ်ခြင်းကို လေ့လာနိုင်သည်။
၂) ။ ကျန်းမာရေးသိပ္ပံ၏ဓာတုနှင့်ဇီဝမော်လီကျူးနည်းပညာဆိုင်ရာဘာသာရပ်တွင်
ဓာတုဗေဒနှင့်မျိုးရိုးဗီဇဆိုင်ရာနည်းလမ်းများကိုအသုံးပြု၍ communicable နဲ့ non-communicable ရောဂါများကိုရှာဖွေနိုင်ခြင်းကိုသင်ကြားသည်။
ဓာတုဗေဒနှင့် geneticကို သုံးပြီး ဇီဝမော်လီကျူးကိုအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းကိုရှာဖွေရုံသာမက ဆေးဝါးနှင့် ပရိုတိန်း/အင်ဇိုင်းပစ်မှတ်များအကြားအပြန်အလှန်ပေါင်းစပ်အကျိုးသက်ရောက်စေမှုများဖြင့် ဇီဝမော်လီကျူးကိုအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းကိုလေ့လာသည်။ ၎င်းသည် ဆေးဝါးသစ်များ ရှာဖွေတွေ့ရှိရန်သာမက တိုးတက်မှုများအတွက်အသုံးချနိုင်သည်။
၃) ။ ဆန်းသစ်တီထွင်သောကျန်းမာရေးသိပ္ပံနှင့်ကျန်းမာရေးဘာသာရပ်တွင်
အလေးထားသင်ကြားပေးသည့်သင်ခန်းစာများမှာဆန်းသစ်တီထွင်မှုနှင့်ကျန်းမာမှု၊ spa နှင့်ကျန်းမာကြံ့ခိုင်ရေးလုပ်ငန်းအတွက်ပြင်ဆင်ခြင်း
ထို့အပြင်ဤဘာသာရပ်သည်ကျန်းမာရေးနှင့်ကျန်းမာရေးနှင့်သက်ဆိုင်သောလုပ်ငန်းပိုင်ရှင်များမှတိုက်ရိုက်အတွေ့အကြုံများနှင့် WildFit နှင့်အသက်ရှည်ခြင်းသဘောတရားတို့ကိုလည်း ဤဘာသာရပ်တက်ရောက်ခြင်းဖြင့် အတွေ့အကြုံဗဟုသုတ ရရှိနိုင်သည်။
၄)။ လုပ်ငန်းခွင်သန့်ရှင်းရေးနှင့် ဘေးကင်းရေး-
စက်မှုလုပ်ငန်း၊ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ကျန်းမာရေးအပါအဝင် အန္တရာယ်အကဲဖြတ်မှုများနှင့် ဘေးကင်းရေးဆိုင်ရာ ကဏ္ဍများစွာကို အလေးပေးသင်ကြားပါမည်။
၂၀၂၁ ခုနှစ် စာသင်နှစ်၊ ဒုတိယသင်တန်းအမှတ်စဉ်အတွက် ၂၀၂၁ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၄ ရက် (သင်တန်း ဖွင့်မည့်ရက် မှာ ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ ၇ ရက်)
၂၀၂၁ ခုနှစ်စာသင်နှစ်၊ တတိယသင်တန်းအမှတ်စဉ်အတွက် ၂၀၂၂ ခုနှစ် ဖေဖာဝါရီလ ၁ ရက် (သင်တန်း ဖွင့်မည့်ရက် မှာ ၂၀၂၂ ခုနှစ် ဧပြီလ ၄ ရက်)
၂၀၂၂ ခုနှစ်စာသင်နှစ်၊ ပထမသင်တန်းကာလအတွက် ပထမအကြိမ်မှာ ၂၀၂၂ ခုနှစ် မတ်လ ၃၁ ရက် ၊ ဒုတိယအကြိမ် မှာ ၂၀၂၂ ခုနှစ် ဧပြီလ ၃၀ ရက် (သင်တန်းဖွင့်မည့်ရက်မှာ ၂၀၂၂ ခုနှစ် သြဂုတ်လ ၉ ရက်)
(အမြန်လမ်းကြောင်းအင်တာဗျူး* ဖြေဆိုနိုင်ခွင့်အား ကျောင်းဝင်ခွင့်လျှောက်ရန်လိုအပ်သည့်အချက်များ အားလုံးပြည့်စုံပြီး သူများသာ တောင်းဆိုခွင့်ရှိပါသည်)
- ၂၀၂၁ ခုနှစ် စာသင်နှစ်၊ ဒုတိယသင်တန်းအမှတ်စဉ်အတွက် ၂၀၂၁ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၈ ရက် တွင် အင်တာဗျူးပါမပါ စစ်ဆေးရန် (အင်တာဗျူးခေါ်မည့်ရက် - ၂၀၂၁ခုနှစ် အောက်တိုဘာ ၁၂-၁၃)
- ၂၀၂၁ ခုနှစ်စာသင်နှစ်၊ တတိယသင်တန်းအမှတ်စဉ်အတွက် ၂၀၂၂ ခုနှစ် ဖေဖာဝါရီလ ၄ ရက် တွင် အင်တာဗျူးပါမပါ စစ်ဆေးရန် (အင်တာဗျူးခေါ်မည့်ရက် - ၂၀၂၂ခုနှစ် ဖေဖာဝါရီလ ၉ ရက်)
- ၂၀၂၂ ခုနှစ်စာသင်နှစ်၊ ပထမသင်တန်းအမှတ်စဉ်အတွက် ၂သုတ်ခွဲထားပါသည်။ ပထမသုတ်မှာ ၂၀၂၂ ခုနှစ် ဧပြီ ၂, ဒုတိယသုတ်ကို မေ ၂ တွင် အင်တာဗျူးပါမပါ စစ်ဆေးရန် (အင်တာဗျူးခေါ်မည့်ရက် ပထမသုတ်မှာ - ၂၀၂၂ခုနှစ် ဧပြီ ၆,၇. ဒုတိယသုတ်ကို မေ ၄)
- ၂၀၂၁ ခုနှစ် စာသင်နှစ်၊ ဒုတိယသင်တန်းအမှတ်စဉ်အတွက် ၂၀၂၁ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာ ၂၃ (ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး) နှင့် ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ ၁၆ (ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးသိပ္ပံ)
- ၂၀၂၁ ခုနှစ်စာသင်နှစ်၊ တတိယသင်တန်းအမှတ်စဉ်အတွက် ၂၀၂၂ ခုနှစ် မတ်လ ၂၃ ရက်
- ၂၀၂၂ ခုနှစ်စာသင်နှစ်၊ ပထမသင်တန်းအမှတ်စဉ်အတွက် ၂၀၂၂ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၂၀ ရက်
ပထမအကြိမ် ကျောင်းသားမှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့် အကြိုမိတ်ဆက်သင်တန်းဖွင့်လှစ်ခြင်း
(ပထမအကြိမ် ကျောင်းသားမှတ်ပုံတင်ကြေးပေးဆောင်ခြင်းကို လက်ငင်းငွေသားပေးချေခြင်းစနစ်ဖြင့်သာ ပေးချေရမည် ဖြစ်ပါသည်)
- ၂၀၂၁ ခုနှစ် စာသင်နှစ်၊ ဒုတိယသင်တန်းအမှတ်စဉ်အတွက် ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၇ (ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး) နှင့် ၂၀၂၂ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီ ၁၀ (ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးသိပ္ပံ)
- ၂၀၂၁ ခုနှစ်စာသင်နှစ်၊ တတိယသင်တန်းအမှတ်စဉ်အတွက် ၂၀၂၂ ခုနှစ် ဧပြီ လ ၄ ရက်
- ၂၀၂၂ ခုနှစ်စာသင်နှစ်၊ ပထမသင်တန်းအမှတ်စဉ်အတွက် ၂၀၂၂ ခုနှစ် ဩဂုတ်လ ၉ရက်
ကျွန်ုပ်တို့၏စံနှုန်းပြည့်ကိုမီသော သို့မဟုတ် စံနှုန်းထက်ပိုလွန်သော (ပျမ်းမျှအဆင့်နှင့်အင်္ဂလိပ်စာရမှတ်) ကိုရရှိသော ကျောင်းသားများသာလျှင် တောင်းဆိုနိုင်ပါသည်။
အထူးအင်တာဗျူးအတွက်ကျောင်းမှ ၇ ရက်အတွင်း ဆက်သွယ်ပါလိမ့်မည်။
(ကျောင်းတွင်းသင်ခန်းစာသင် ၊ စာသင်ကာလ ၃ ခု ၊ ၁ နှစ်)
(အမှတ်ပေါင်း ၃၆ မှတ် /စာသင်ကာလ ၃ ခု/ စုစုပေါင်းစာသင်ကာလ ၁ နှစ်) ထိုင်းဘတ် ၁၁၇,၇၀၀ / စာသင်ကာလ/၁ခု
(စာသင်ကာလတစ်ခု = ၄ လ)
~ ထိုင်းဘတ် ၃၅၃,၁၀၀ /တစ်နှစ်
(အမှတ်ပေါင်း ၄၈ မှတ်/ စာသင်ကာလ ၆ ခုမှ ၉ ခု/ စုစုပေါင်းစာသင်ကာလ ၂ နှစ်မှ ၃ နှစ်) ထိုင်းဘတ် ၁၂၇,၇၀၀ / စာသင်ကာလ/၁ခု
~ ထိုင်းဘတ် ၃၈၃,၁၀၀ /တစ်နှစ်
(အမှတ်ပေါင်း ၄၈ မှတ်/ စာသင်ကာလ ၉ ခုမှ ၁၂ ခု/ စုစုပေါင်းစာသင် ကာလ ၃ နှစ်မှ ၄ နှစ်)
ထိုင်းဘတ် ၁၂၇,၇၀၀/ စာသင်ကာလ/၁ခု
~ ထိုင်းဘတ် ၃၈၃,၀၀၀ /တစ်နှစ်
(ကျောင်းတွင်းသင်ခန်းစာသင် ၊ စာသင်ကာလ ၂ ခု ၊ ၁ နှစ်) ထိုင်းဘတ် ၁၁၇,၇၀၀ / စာသင်ကာလ/၁ခု
(စာသင်ကာလတစ်ခု = ၆ လ)
~ ထိုင်းဘတ် ၂၃၅,၄၀၀ /တစ်နှစ်
(ကျောင်းတွင်းသင်ခန်းစာသင် ၊ စာသင်ကာလ ၂ ခု ၊ ၁ နှစ်) ထိုင်းဘတ် ၁၃၂,၇၀၀ / စာသင်ကာလ/၁ခု
~ ထိုင်းဘတ် ၂၆၅,၄၀၀ /တစ်နှစ်
(၆) Exchange Student
(ကျောင်းတွင်းသင်ခန်းစာသင် ၊ စာသင်ကာလ ၂ ခု ၊ ၄လ မှ ၆လ) ထိုင်းဘတ် ၁၁၇,၇၀၀/ စာသင်ကာလ/၁ခု
အမှတ်ပေါင်း ၆ မှတ်ကိုမိခင်တက္ကသိုလ် မှယူလို့ရသည်။
(အဝေးသင်အစီအစဥ်= စာသင်ကာလ ၂ ခု ၊ ၄လ မှ ၆လ) အခမဲ့ (ကော်မတီ၏သုံးသပ်ချက်ဖြင့်ဝင်ခွင်)
แขนง Herbal sciences #Herbalsciences
สมุนไพร, วิทยาศาสตร์สมุนไพร,ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ, การแพทย์แผนไทย, การแพทย์ทางเลือก มาตรฐานสมุนไพร, พฤกษเคมี , ฤทธิ์ทางชีวภาพ, น้ำมันหอมระเหย
(Herbs, Medicinal plants, Herbal scien ces, Natural products, Traditional Thai medicine, Alternative medicine, Standardization of herbal medicines, Phytochemistry, Biological activity, Essential oils)
แขนง Biomolecular technology #Biomolecular technology
เทคโนโลยีชีวภาพ, มาลาเรีย, โรคติดเชื้อ, สารพันธุกรรม, ชีวโมเลกุล, สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ, สารชีวโมเลกุล, การปรับเปลี่ยนโปรตีน
(Biomolecular technology, Malaria, Infectious diseases, DNA, Molecular Biology, Bioactive compounds, Biomolecules, Protein modifications)
Tieng Viet Version
Tương lai của Bạn!! Hãy tham gia Mạng lưới Y tế Toàn cầu với Chúng tôi
Bạn là người có trình độ tiếng Anh tốt và quan tâm đến việc lấy bằng Thạc sĩ trong
lĩnh vực Bạn quan tâm hoặc liên quan đến bằng Cử nhân của bạn trong bất kỳ lĩnh
vực nào đều có thể đăng ký nhập học từ bây giờ đến Hạn chót vào ngày4tháng 10 năm 2021
@Trực tiếp tại Campus hoặc Zoom hoặc Phỏng vấn qua Skype
Đợt tuyển sinh thứ 1 năm 2022: từ ngày 31/3/2022 đến 30/4/2022 (Học kỳ I năm 2022)
tham gia phỏng vấn: ngày 6-7/04/2022 và 4/5/2022
Đợt tuyển sinh thứ2năm 2021: 4/10/2021 (Chương trình Y tế công cộng) (MPH/Ph.D. Non Course only)
4/10/2021, Chương trình Y tế công cộng (nghiên cứu)
tham gia phỏng vấn: ngày 12-13/10/2021
Đợt tuyển sinh thứ3năm 2021: 5/2/2022 (Chương trình Y tế công cộng) (MPH/Ph.D.Non Course only)
tham gia phỏng vấn: ngày 9/2/2022 (Lịch dự kiến)
Đăng ký CPHS Ngay bây giờ !!!
Tải xuống và gửi cùng với tất cả Tài liệu Ứng tuyển
qua Email/Bưu điện - Thời gian Phỏng vấn vào tháng 3/tháng 4/tháng 10
(Áp dụng hằng năm)
2.>> (Hệ thống trực tuyến từ Trụ sở chính vào Tháng Hai – Tháng Ba)
Ngôn ngữ: tiếng Thái - Không đề xuất cho sinh viên quốc tế!!
Tải biểu mẫu đăng ký (CPHS) và tất cả tài liệu ứng tuyển
(Áp dụng hằng năm) Ứng viên phải sử dụng địa chỉ Gmail để đăng ký
Đối với sinh viên quốc tế (THB)
(Inhouse Program :3Học kì : 1 Năm)
(36 Tín chỉ/3Học kì /Thời gian học tập 1 year)
Chương trình3học kì trong 1 năm
117,700 thb : Học kì
~ 3,887 USD/1 Học kì
Mỗi học kì là4tháng
~ 11,660 USD/1 năm
Tiến sĩ Y tế công cộng : Non Course work Program
(48 Tín chỉ/ ~6-9 Học kì/Thời gian học tập ~2-3 năm)
127,700thb : Học kì
~ 4,220 USD/1 Học kì
~ 12,660 USD/1 năm
Tiến sĩ Y tế công cộng: Course work Program
(48 Tín chỉ / ~9-12 Học kì / Thời gian học tập ~3-4 năm)
127,700 thb : Học kì
Thạc sĩ Y tế công cộng (Nghiên cứu)
(Inhouse Program :2Học kì / 1 Năm)
(36 Tín chỉ/ ~4 Học kì / Thời gian học ~2năm)
Chương trình2học kì trong 1 năm
~ 3,887 USD/
Mỗi học kì là6tháng
~ 7,774 USD/1 năm
Tiến sĩ Y tế công cộng (Nghiên cứu)
(48 Tín chỉ / ~8-12 Học kì / Thời gian học tập ~ 3.5-6 năm)
132,700 thb : Học kì
~ 4,380 USD/
~ 8,760 USD/1 năm
Chương trình Y tế công cộng
Chính sách và quản lí sức khỏe
Các chương trình giáo dục của chúng tôi tập trung vào việc giúp học sinh phát triển tư duy phản biện và các kỹ năng ứng dụng giải quyết vấn đề cần thiết để giải quyết nhiều thách thức sức khỏe cộng đồng. Sinh viên nhóm ngành Chính sách và quản lí sức khỏe đến từ khắp Thái Lan và từ khắp nơi trên thế giới. Họ hoàn thành xuất sắc, và tích cực tham gia các hoạt động học thuật. Tất cả sinh viên của chúng tôi đều có nhiều kinh nghiệm làm việc và họ làm phong phú thêm lớp học với những hiểu biết và quan điểm của họ. Chúng tôi tin rằng những trải nghiệm bổ sung ngoài lớp học là một phần thiết yếu của giáo dục sức khỏe cộng đồng và mối quan hệ chặt chẽ của Trường với các nhà hoạch định và thực hành chính sách y tế công cộng hàng đầu mang đến cho sinh viên cơ hội áp dụng kiến thức trên lớp vào thực tiễn, quản lý sức khỏe cộng đồng và các vấn đề chính sách ở Thái Lan và ở nước ngoài.
Chương trình được thiết kế để cung cấp sự hiểu biết về sức khỏe cộng đồng; các vấn đề sức khỏe sinh sản và dân số cũng như các kiến ​​thức cần thiết liên quan tới nhu cầu sức khỏe cộng đồng và các can thiệp sức khỏe sinh sản. Chương trình cũng sẽ phát hiện và đánh giá các thách thức cộng đồng, quốc gia và toàn cầu liên quan đến bối cảnh xã hội, văn hóa và kinh tế ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng và sức khỏe sinh sản. Chương trình này là sự kết hợp của2môn học Đánh giá cộng đồng và Sức khỏe sinh sản
1. Đánh giá cộng đồng bao gồm các khái niệm cơ bản về cộng đồng, cấu trúc cộng đồng, cách tiếp cận cộng đồng, Lập bản đồ cộng đồng, Lập bản đồ xã hội, Đặc điểm văn hóa và xã hội của cộng đồng, Đánh giá có sự tham gia của cộng đồng, Đánh giá cộng đồng và Ưu tiên các vấn đề của cộng đồng2. Sức khỏe sinh sản bao gồm Giới thiệu và Tăng cường khả năng tiếp cận với sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình, sức khỏe bà mẹ và trẻ em, sức khỏe vị thành niên, mang thai ngoài ý muốn và phá thai, ngăn ngừa HIV / AIDS ở thanh niên, ung thư hệ thống sinh sản và chăm sóc người cao tuổi. Kết thúc khóa học, sinh viên ​​sẽ có thể thực hiện đánh giá tại các cộng đồng được nghiên cứu; hiểu và phân tích các tình huống hoặc các vấn đề sức khỏe sinh sản trong cộng đồng được nghiên cứu và các giải pháp của nó để tăng cường khả năng tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản.
Sức khỏe đô thị và sức khỏe toàn cầu (Urban and Global Health) nỗ lực thúc đẩy sinh viên, cả thạc sĩ và tiến sĩ, hướng tới nhiều chủ đề sức khỏe đô thị và toàn cầu, từ khía cạnh kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa và môi trường. Đặc biệt là các khóa học trọng điểm về Sức khỏe Đô thị và Toàn cầu sẽ cho phép sinh viên trở thành những người tự học tới suốt đời khi đương đầu với các vấn đề sức khỏe cộng đồng trong các lĩnh vực mà họ đảm nhận một cách toàn diện.
Thông tin về Sức khỏe môi trường và Sức khỏe Nghề Nghiệp.
Môi trường và Sức khỏe nghề nghiệp tập trung vào các vấn đề môi trường và quản lý nhằm cải thiện sức khỏe cộng đồng và giảm thiểu các tác động xấu đến con người. Những tác động của việc tiếp xúc với ô nhiễm môi trường là vấn đề chính sách công hàng đầu ở Thái Lan và một số quốc gia. Các khu vực công, tư và học thuật đều đang cố gắng nâng cao khả năng kiến thức hiểu biết về môi trường của chúng ta và bảo vệ chúng. Khóa học tích hợp các bộ môn bao gồm Sức khỏe Môi trường và Nghề nghiệp, Dịch tễ học Môi trường, Đánh giá Phơi nhiễm và Đánh giá Tác động của Con người. Do đó, mục tiêu chính của chương trình là đào tạo các chuyên gia có trình độ chuyên môn về môi trường và sức khỏe nghề nghiệp. Điều này bao gồm xác định mối nguy, nhận biết các quần thể có nguy cơ và ngăn ngừa phơi nhiễm. Nhiều loại tác nhân độc hại gặp phải cả trong cộng đồng và nơi làm việc, nhưng có sự khác biệt đáng kể về hoàn cảnh và mức độ phơi nhiễm và do đó, về các chiến lược được sử dụng để kiểm soát phơi nhiễm và ngăn ngừa bệnh tật. Tại CPHS, nghiên cứu Thạc sĩ và Tiến sĩ cho cấp độ Y tế Công cộng là đa ngành và rộng khắp, có phạm vi từ địa phương đến quốc tế. Các giảng viên của chúng tôi hoạt động tích cực với tư cách là cố vấn về các vấn đề Y tế Công cộng trong nước và quốc tế
Thông tin về Hành Vi Sức Khỏe
Nhóm ngành Hành vi Sức khỏe được thiết kế cho sự nghiệp nghiên cứu trong các cơ sở học thuật, phi lợi nhuận, chính phủ và cho các vai trò lãnh đạo. Sinh viên sẽ học được tầm quan trọng của hành vi sức khỏe góp phần vào các vấn đề sức khỏe cộng đồng hiện nay, phạm vi các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi, dinh dưỡng, hoạt động thể chất, béo phì, uống rượu, hút thuốc, lạm dụng chất gây nghiện. Khái niệm và lý thuyết liên quan đến hành vi sức khỏe và các yếu tố nguy cơ. Các sinh viên nên phát triển nghiên cứu về hành vi sức khỏe trong các quần thể mà họ đã làm việc hoặc sẽ làm việc trong tương lai. Họ cũng có thể tiến hành nghiên cứu và can thiệp về lạm dụng rượu, chất kích thích và dân số nhiễm HIV / AIDS bao gồm phát triển các kỹ thuật phòng thí nghiệm để phát hiện lạm dụng rượu và chất gây nghiện trong dịch cơ thể.
Chương trình Y tế công cộng (Nghiên cứu)
Khoa Học Y tế Công Cộng bao gồm2chương trình giảng dạy là Thạc sĩ Khoa học y tế Công Cộng (M.Sc) và Tiến sĩ Khoa Học Y tế Công Cộng (Ph.D). Trong kì học năm 2022, Đại học Khoa Học Y tế Công Cộng sẽ tiếp cận tới4nhóm ngành bao gồm:
Cần sa và khoa học dược liệu.
Công nghệ hóa học và sinh học phân tử trong sức khỏe công cộng.
Khoa học sức khỏe và tinh thần
1, Cần sa và khoa học thảo dược: nhấn mạnh tới vấn đề cơ bản trong nghiên cứu khoa học về cần sa liên quan tới y tế công cộng và việc sử dụng chúng đòi hỏi yêu cầu dựa trên pháp luật. Thêm vào đó, nhóm ngành nghiên cứu này cũng cung cấp nhưng dược liệu thay thế bằng cách sử dụng những ứng dụng hóa học và sinh học trong các thảo mộc đã được tách chiết các thành phần độc hại.
2, Công nghệ hóa học và sinh học phân tử trong sức khỏe công cộng: nhấn mạnh vào việc sử dụng các kỹ thuật hóa học và phân tử sinh học để điều tra các bệnh truyền nhiễm và không lây nhiễm. Ngoài ra, nhánh này cũng khám phá các biến đổi của phân tử sinh học bằng cách sử dụng phương pháp tiếp cận hóa học và di truyền cũng như tương tác liên kết giữa các loại thuốc được nghiên cứu và protein / enzyme đích. Điều này có thể áp dụng cho việc khám phá và phát triển thuốc.
3, Khoa học Sức khỏe và Tinh thần: nhấn mạnh vào sự đổi mới và thiết lập sức khỏe, cũng như chuẩn bị cho hoạt động kinh doanh chăm sóc sức khỏe, spa và thể dục. Ngoài ra, nhóm ngành này cũng cung cấp kinh nghiệm trực tiếp từ một số chủ doanh nghiệp liên quan đến sức khỏe và tinh thần, cũng như khái niệm về WildFit và tuổi thọ.
4, Vệ sinh và an toàn lao động: nhấn mạnh vào nhiều khía cạnh của đánh giá rủi ro và an toàn bao gồm các ngành công nghiệp, môi trường và sức khỏe. Ngoài ra, nhóm ngành này cũng đưa ra cách quản lý với dư lượng hóa chất và cách phân tích các dư lượng này.
Notification 1/2022 2/2021
1st Trimester (1) 1st Trimester (2) 2nd Trimester
Admission Deadline March 31, 2022
(Open trimester August 9,2022) April 30, 2022
(Open trimester August 9,2022) October 4, 2021
(Open trimester December 9,2021)
- Master Degree Program April 6, 2022 May 4, 2022 October 12-13, 2021
- Doctoral Degree Program April 7, 2022 May 4, 2022 October 12-13, 2021
July 19,2022 July 19,2022 November 23,2021 & December 16,2021
Public Health Public Health Sciences
and Orientation Program July 19,2022 July 19,2022 November 23,2021 & December 16,2021
August 9, 2022 August 9, 2022 December 7,2021 & January 10,2022
and submitted with all Application Material via email/ Post Mail
(All year apply)
2.>> (System Open only Feb -Mar)
Thai-Language System - Not Suggest for Foreigner!!
3.>> Upload CPHS Application form and All Application Material
(All year apply) Applicant must use Gmail address for register
Below isalist of all application materials that may be required by the program to which you are applying.
Three recent 2x2 inch photograph ( Blue Background)
Report of English test score (one or the other)
- Graduated from University where certify by OCSC <<Click here
Example Concept Paper
Application fee (can request paid later during first registration in reasonable etc. transferring problem )
The admissions staff at the College of Public Health Sciences works with interested students every day to help them navigate through the admissions process and learn more about our Program. If you have any further queries please do not hesitate to contact us
Admissions Coordinator : Mr. Poohmerat Kokilakanishtha